Shirkii qiimaynta barnaamijka dib u dajinta oo loo qabtay qaarka mid ah deegaanada dalka ayaa ka dhacay Naasireed. - Cakaara News
Shirkii qiimaynta barnaamijka dib u dajinta oo loo qabtay qaarka mid ah deegaanada dalka ayaa ka dhacay Naasireed.
Naasireed(CN) sabti 24,October, 2015 Shirkaa qiimayta ah oo ay soo diyaarisay wasaarada arimaha faderaalka JDFI oo ka dhacay caasimada deegaanka oromiya ee Nasireed ayaa loo qabtay deegaanada ay ka mid yihiin deegaanka Soomalida Canfarta Bunushaangulka iyo Gambeela, qiimayntaa oo diirada lagu saarayay heerarka waxqabadka ee ay deegaanadu gaadhsiiyeen barnaamijka dajinta ayaa waxaana deegaanka soomalida itoobiya uga qayb’galay shirka masuuliyiin ka socday xafiisyada horumarka DDSI Sida xafiiska biyaha, xafiiska waraabka iyo horumarinta dooxooyinka maaliyada waxbarashada, caafimaadka iyo xafiiska adeega shacabka iyo kobcinta maamulka DDSI.
Shirka qiimayta ah oo ay hogaaminayeen masuuliyiinta sare ee wasaarada arimaha faderaalka JDFI ayaa waxaa lagu dhagaystay warbixnta waxqabadka deegaanada ee dhinaca dajinta oo lagu cabirayay heerka xawaaraha hirgalinta iyo habraacyada lagu fuliyay barnaamijka dib u dajinta iyo sida ay u fuliyeen istaraatajiyadihii iyo qorshayaasii u yaalay deegaanada ee dhinaca dib u dajinta.
Haddaba warbixinta waxqabadka baraamijka dib u dajinta ee deegaanka soomalida itoobiya oo uu soo jeediyay wasiirka waraabka iyo horumarinta dooxooyinka DDSI mudane Suldaan khayre oo ahayd mid Ku sar go’an guulaha ay xukuumada DDSI ka gaadhay barnaamijka dajinta ayaa noqotay warbixinta si mug leh u soo jiidatay wasaarada arimaha faderaalka islamarkaana ku qotantay xaqiiqa dhabta ah ee laga gaadhay barnaamijka dajinta deegaanka soomalida itoobiya.
Waxaana, laysla qaaday in deegaanka soomalida itoobiya noqday mid ugu horeeya deegaanada loo hayay qiimaynta islamarkaana uu deegaanka soomalida itoobiya ku biiray deegaanada hore u maray dalkeena, waxaana la xaqiijiyey in uu hayay deegaanka somalida itobiya hormuudka deegaanada dhinaca dib u dajinta taasi oo deegaanada kale loo sheegay in ay tusaale ka qaataan deegaanka soomalida itoobiya sida ay uga midho dhaliyeen hayaankii hirgalinta barnaamijka dajinta.
Waxaya xukuumada DDSI ku guulaysatay in ay sanadiii ugu danbeeyay dib u dajinta u samayso 177,264 qoys oo markii hore ahaa bulsho xoolo dhaqata ah in laga dhigay xoolo dhaqato beeralay waxayna u dhigantaa in qorshihii lagu guulaystan 89% waxa kale oo lagu amaanay deegaanka nidaamka looga hirgaliyay goobaha dib u dajinta adeegyada aas aasiga ah sida caafimaadka waxbarashada biyaha nadiifta ah iyo dhamaanba adeegyada kale ee ay bulshadu u baahan tahay.